Ukuya kuthenga ibhedi, ukucwina okanye ukucwina, abaninzi bafuna ukufunda okuninzi malunga nokufumana okutsha. Kodwa xa kuziwa ekuthengeni indlu yangasese, akukho phantse imibuzo. Kukholelwa ukuba esi sihloko sihamba kakhulu kwaye sibuze malunga nezitya zangasese zangasese kwintengiso akufanele. Oku kungalunganga, kuba indlu yangasese iyona nto yinto yansuku zonke. Akuyi kuxhomekeka kuphela kwimvakalelo yakho, kodwa kwimpilo yentsapho yonke. Ngoko makhe sibone ukuba sibheke ntoni xa sikhetha izinto ezibucayi:
Zingaphi izinto ozifunayo
Kwiindawo eziqhelekileyo izitya ezingaphezulu kweyodwa yangasese inzima kakhulu ukuyibeka. Kodwa ukuba igumbi lokungceba likhulu ngokwaneleyo, ngoko unokufaka kuyo ibhidi. Kwizindlu zezindlu zanamhlanje kukho indlu yangasese yeendwendwe. Kodwa akufanelekile ukuxhobisa i-bidet. Kwizindlu zokuhlala okanye kwiindawo zokuhlala, ezakhiwe kummandla ngamnye, konke kuxhomekeke kumthengi. Njengomgaqo, ukuya kwindlu yangasese yezivakashi zingeniswe (umgangatho omnye kwisiteji ngasinye). Kwiibumbi zokulala kukho ishati okanye indlu yokuhlambela, apho indlu yangasese ifumaneka khona.
Isitya se-Toilet okanye i-bidet impahla
Ngokuqhelekileyo, bakhetha ukunyaniseka kwendawo yokucoca okanye i-porcelain engcolileyo. Kodwa unako ukuthatha kunye neplastiki, isinyithi, iglasi, isinyithi kunye negolide. Ukuba i-sanfarfor kunye ne-sanfay ziyimfuneko, ngoko bahluke njani omnye komnye? Kwaye ke, kutheni ixabiso le-porcelain liphezulu kakhulu? I-teknoloji yokuveliswa kwezi mveliso kubiza kakhulu, kodwa umgangatho uphezulu. Ngaphandle, ezi zixhobo azifani ngokungafaniyo, ukuba zihlanganiswe nge-glaze enhle. Ahluke kwi-hygroscopicity (porosity). Kwi-porcelain kuncinci kakhulu.
Oku akuchaphazeli nje kuphela ixesha lokusetyenziswa kwaloo nto, kodwa kunye nobuchule obuhle bokubuyisela ukugqwala, ukungcola kunye ne-urea. Izivumba ezinxulumene azikho. Nangona kungekho mmahluko omkhulu phakathi kwe-porcelain kunye ne-faience. Ixesha lokusebenzisa i-faience iminyaka engama-40, i-porcelain yiminyaka engama-60. Ukulungiswa ngokuqhelekileyo kwenziwa okungenani kwiminyaka eyi-15 kamva. Ngako oko, umehluko omkhulu kukuba ukugqithisa okugqithiseleyo kudinga ixesha elininzi kunye nokuzama ukunyamekela.
Ukukhethwa kwesebe yangasese
Igama langoku "lwesitya yangasese" isitya sezindlu zangasese safunyanwa ngenxa yenkampani yaseSpain "Unidad". Wayekwazi ukukhululwa ekupheleni kwekhulu le-19 enye yeyokuqala. Xa ubeka indawo yangasese, kufuneka uhlale ubeka ingqalelo kwi-draiping drain. Indlu yangasese kufuneka ihambelane nokungena kwi-riser (sewer). Ngokwakhelo lwendlu yangasese, zixhamle, zincambile kwaye zi-oblique. Xa kuninzi indawo yokucoca ifumaneka, indlu yangasese ngokwayo ingasondelwa kwiphakamiso. Oku kuyindlela enhle kwizindlu zangasese ezincinci.
Isilungiselelo sokubambisana kwetanki yokucoca kunye neyeseyile yangasese
Kukho ezimbini iintlobo. Xa itanki elihlangeneyo kufuneka liboshwe kwindlu yangasese enekhefu okanye ngqo kumzimba wendlu yangasese. Uhlobo lo kuqala luhambelana, i-monoblock yesibili. Ukuba indawo iyahlukileyo, itanki inokusekwa kunaliphi na izinga. Ngokuqhelekileyo zifakwe eludongeni. Ungasebenzisa isakhelo, esiqhotyoshelwe kwitanki, kunye nendlu yangasese.
Ukusuka kule ndlela kukho iingxaki ezininzi: ngoko ukukhwabanisa kuphelile ukusebenza, ngoko amanzi aqala ukuhamba, aze agijime, ngaphandle kokumisa, okhoyo ngoku. Gwema ezi ngxaki xa uthengela umzekelo nge-design elula. Xa uthengiswa ungafumana iitanki ezimbini. Zinamaqhosha amabini. Ukucindezela enye, unako ukukhulula iititha ezili-8 zamanzi, kunye nezinye-4 ilitha. Kodwa oku akunako ukugcina amanzi. Ngoku sifumene esinye isisombululo. Ndixhobile nje itanki ngeqhosha elikhupha amanzi kuphela xa le bhokisi iqanjwa. Qhagamshelana neengcali, zinolwazi olungaphezulu. Ngelishwa, ungathenga indlu yangasese ephosakeleyo okanye uxhotywe ngeprogram engenakuqondakala. Ewe, kwaye i-fake kukho ezininzi. Iinkqubo zobunono zithembeke kakhulu, zikhonza ixesha elide, akukho sandi xa itanki igcwele. Indlu yangasese ihlambiswa ngokunyanisekileyo, ukuhamba kukhokelwa ngabaphambukeli phantsi kwee-roundings eziphezulu ngaphaya kobude obude bomjikelezo.
Uyilo lwangaphakathi lwesitya
Ukukhetha indlu yangasese kuyimfuneko, ukuqhubeka nokukhetha kwabo kuyo ukuhlala. Ukuba kusondele kumda wangaphambili, ngoko umgca phambili, kwaye ukuba ngasemva, ngoko, ngokulandelanayo, nangemva. Isitya sasekhaya sangasese esinomdongwe sithathwa njengento yonke. Induduzo yodwa ingenziwa kuphela ngokukhethwa komntu ngamnye. Ungalibali ukujonga ubude becebo kunye nobukhulu bayo. Ukuthabatha indlu yangasese, cingisisa ngelungu eliphezulu leentsapho.
Yonke into ehambelana nokukhethwa kwitshabe yangasese ingafakwa kwi-bidet (ukuyila, izinto, ukulungisa iindlela). Kodwa le gadget ipulangwe ineenjongo ezahlukeneyo. Le bhubhe encinci, kodwa amanzi kulo akungena kwiTanki, kodwa ngokukhawuleza kwipompo. I-crane ifakwe kwisitya. Baqeshise nge mix mixers. Oku kukuvumela ukuba ulungelelanise ulwalathiso lwe-jet usebenzisa intloko ejikelezayo.
Xa uthengiswa unako ukufumana izindlu zangasese ezenza umsebenzi we-bidet. Le ngcamango yendalo yonke yabaculi basekhaya, kodwa kwimeko yokujonga ingozi kwaye ayifuni. Indlu yangasese iyasetyenziswa njengemigodi.
Unganqikazi ukubuza abathengisi nayiphi na imibuzo enomdla kuyo. Njengomthetho, abaqeqeshi bahlala bevuya ukuxelela ulwazi lwabo.
Igumbi lokulala kwi style Provence
Ingaphakathi kwisitayela esiphezulu
Indlela yokwenza umthi weKrisimasi kwiphepha elonakele ngezandla zakho zoNyaka omtsha, ifoto
Amanyathelo ama-7 ekubhekiseleleni ekudalweni kwendlela yokulungiswa
Ukucwangcisa ngePillow Handmade
Ziziphi izifo zesifuba samabhinqa?
Ukuba ngokwakho kuyinto yokunethezeka ayifumaneki kubantu abaninzi
Ukunyuka, ubulili ngobunye ubusuku nezizathu ezilishumi zokuba uyingxenye
Iintlobo zabantu zihlambulula indlela yokucoca umzimba
Buckwheat kunye nemifuno kunye noshizi ebhodweni
Ukuxolelwa ngeCawa 2016: Amasiko, amaRites, iiNkondlo kunye neSMS
Xa umzali uDmitrievskaya ngoMgqibelo 2015: ukukhunjulwa kwabafileyo
Kutheni i-boyfriend isoloko ithi ndiphosakele?
Umyeni owayekade engamthandi umntwana
Ukukhulelwa ngokukhawuleza kunye nokuziphatha kakubi
Iipencake ezinentliziyo ezigqobileyo